Jiilaal baa halkan jooga! Miyaan Iibsadaa Qubeys Heer-kulka? Dhageyso Khubarada, Layaab Ma Leh Inta Dad Badan Doonayaan Inay Waxka Beddelaan !!!
Bogga ugu weyn / blog / Jiilaal baa halkan jooga! Miyaan Iibsadaa Qubeys Heer-kulka? Dhageyso Khubarada, Layaab Ma Leh Inta Dad Badan Doonayaan Inay Waxka Beddelaan !!!
2021 / 01 / 15 Qoondayntablog 5972 0
Iskuulka Ganacsiga Musqusha 2020-11-19
Iyadoo la tixraacayo godadka lagu arkay qubayska laga soo bilaabo carruurnimada ilaa qaan-gaarnimada, waa wax laga xumaado in wax badan la yiraahdo.
Qubeyska, waxaa la ogaaday in aysan jirin biyo kulul!
Sikastaba, su’aasha ugu dambeysa waxay tahay: Waa maxay sababta ay u adagtahay in si fiican loo maydho?
Si loo yiraahdo qubeyska, dhab ahaan, waa wax fudud, oo ay ku jiraan usha, qasabada, biiyaha loo qeybiyo buufinta sare iyo buufinta gacanta.
Laakiin dadka qaar waxay yiraahdaan, waxaan ku qaatay toban yuan si aan u iibsado adeegsi wanaagsan. Qubeysku wuu jabay, ka dibna wuxuu beddelayaa qubeys cusub, adiguna waxba ma yeeli doontid. Ilaa intaad nadiif ku dhaqi karto.
Marka, wax ka qaldan ma jiraan, laakiin waaya-aragnimada aakhirka isku mid ma aha.
Waxay u egtahay, 50 senti oo ah rootooyin uumis ah, waad cuni kartaa in kugu filan, kumaan kun yuan oo Michelin ah ayaa waliba cuna ku filan. Labaduba way buuxaan, kee baad jeceshahay inaad cuntid?
Furaha kuma jiro natiijooyinka, laakiin wuxuu ku jiraa raaxeysiga geedi socodka. Maanta waxaan ka hadli doonaa qubayska ~
Mid. Noocyada Maydhashada
Guud ahaan, waxaa jira laba nooc oo waaweyn oo madax lagu maydho suuqa hadda: heerkulbeegga iyo caadi. Iibsashada dad badan oo inta badan aan go'aan lahayn, ma oga inay doortaan qubeys heerkulbeeg ah ama mid caadi ah. Maxay ku kala duwan yihiin labadooda?
Qubeyska caadiga ah, xuddunta waa gabal dhoobada ka mid ah oo lagu buufiyo heerkulbeegga, iyadoo la wareegaya si loo hagaajiyo heerkulka biyaha, kor iyo hoos u aadaya si loo xakameeyo socodka biyaha. Waa mid aad u habboon oo dhakhso leh in la isticmaalo.
Laakiin badanaa isticmaal qubeyska ayaa dhibaato ka heli doonta, xilliga qaboobaha, way adag tahay in la xakameeyo heerkulka biyaha heerkul gaar ah. Taasi waa sababta oo ah tubbada caadiga ah ee qubeyska waa in la isku daro biyo qabow iyo biyo kulul si loo hagaajiyo heerkulka biyaha. Marka cadaadiska biyaha ee biyaha kulul ama qabow is badalaan, heerkulka biyuhu si dabiici ah ayuu u xasilayaa oo u kululaanayaa una qabownayaa
Iyo qubeyska heerkulka heerkulka kor loo qaaday, dabada waxaa lagu hagaajin karaa tuubada leh heerkulbeeg u gaar ah. Isku dheelitirka otomaatiga ah ee cadaadiska biyaha qabow iyo kulul, si loo ilaaliyo xasilloonida heerkulka biyaha.
Marka laga eego dhanka amniga, heerkulka caadiga ah ee qubeyska way adag tahay in la xakameeyo. Qaangaarka qubayska okay, awood u leh inay ka jawaabaan waqti ku habboon. Hadday tahay waayeelka ama carruurta maydhanaysa, way fududahay in lagu gubo cawaaqib xumo.
Qubeyska heerkulka kuleylka ah ayaa lagu dejin karaa heerkulka isku dheelitirka otomaatiga ah, taas oo yareynaysa fursadaha gubashada. Iyo gidaarka gudaha tuubada ayaa sidoo kale fulisay daweyn anti-gubasho ah. Xitaa haddii aad si shil ah u taabato tuubada, laguugumala sii daayo, adoo hagaajinaya badbaadada qubayska.
Intaas waxaa sii dheer, qubeyska sidoo kale waxaa loo qaybin karaa qubeyska gacanta, qubeyska sare ee buufinta iyo dhinaca lagu buufiyo dhinaca isticmaalka.
Roob gacmeedku waa kuwa ugu caansan uguna badan. Qoyska guud waxay yiraahdeen qubayska, badiyaa waxaa loola jeedaa qubeyska gacanta. Roobkani waa fududahay in la isticmaalo, wuxuu dhaqi karaa dhammaan qaybaha jirka, oo leh kursi go'an, sidoo kale wuxuu ku guuleysan karaa shaqada qubeyska sare ee buufinta, oo aad u qiimo jaban.
Hadda guryo aad u tiro badan ayaa lagu qalabeeyaa qubeyska ugu sarreeya ee lagu buufiyo. Cabirka qubeyskan ayaa ka weyn, guud ahaan wax ka badan 8 inji, dherer iyo ballac qaar ayaa ka badnaan kara 1 mitir. Qubayska buufin ee ugu sarreeya wuxuu ku guuleysan karaa roob, ceeryaamo biyo ah iyo marin biyood kale, si markaa isticmaaluhu ula mid noqdo dabeecadda, dareemo taabashada ugu toosan ee biyaha.
Qubeyska Dhinac Dhinac ah
Qubeyska dhinaca lagu buufiyo wuxuu u baahan yahay in lagu hagaajiyo darbiga, biyo ka buufinta dhinaca, guryaha kaabayaashu way ka weyn yihiin, badanaa si loo gaaro howlaha duugista. Qubeyska qaarkood buufinta dhinaca waxay hagaajin kartaa xagasha si loo gaaro kor iyo hoos, bidix iyo midig ama dheecaan biyo aan caadi ahayn, waad ku luqluqi kartaa oo ku duugi kartaa jirka oo dhan. Qubeyska dhinac lagu buufiyo guud ahaan looma iibin si gooni gooni ah, badanaa waxaa loo iibiyaa qeyb ka mid ah nidaamka qubeyska la qariyo ama qolka qubeyska.
Ta Labaad, Qaabka ay Biyuhu uga soo baxaan Qubayska
Biyaha Dabiiciga ah
Sida magaca ka muuqata, biyaha dabiiciga ahi waa biyaha lagu buufiyo habka ugu dabiiciga ah, iyada oo aan la daweyn. Lagu buufiyay godadka silikoonada qubeyska, biyaha laftooda oo xoogaa cadaadis ah, jirka oo dhan ayey biyo raaci karaan, waa habka ugu caansan ee biyaha.
Biyaha Xumbada Hawada
Waxaa jira nasasho hawo marin biyoodka gudaha qubeyska. Qulqulka xawaaraha sare ee biyuhu wuxuu socodsiiyaa qulqulka hawada oo wuu isku daraa si uu u sameeyo tiir biyo ah Waxay u rogaysaa biyaha buufin asalka ah biyo daadanaya. Biyaha xumbadu way buuxaan oo jilicsan yihiin. Ka dib markii biyuhu ku soo yaacaan jirka, goobooyinka yaryar ee ku harsan jirka ayaa sii wadaya inay qarxaan, iyagoo keenaya qabow qabow.
Biyaha duugista waa qulqulka biyaha qulqulka godka duugista ah. Godka duugista ayaa leh rotor rogi kara. Qalabka rotor-ka waxaa wada saameynta socodka biyaha wuxuuna ku rogmadaa xawaare sare gudaha qubeyska, isagoo soo saaraya qulqulka biyaha asagoo goynaya qeyb ka mid ah socodka biyaha inta jeer. Burburka noocan oo kale ah ee biyaha ayaa ku garaaca jirka si uu u ciyaaro doorka duugista, oo loogu yeero biyaha duugista.
Biyaha lagu buufiyo waa sababta oo ah daloolka buufinta ee guddiga si gaar ah loogu talagalay. Biyaha qulqulaya ceeryaanta soo buufisa. Biyaha ceeryaantu waxay leeyihiin aag ballaadhan, oo ku ahaanshaha ceeryaanta biyuhu waxay siinaysaa qubayska khibrad ka duwan tii hore.
Badanaa waxaa lagu arkaa madaxyada qubayska kore, mabda'a waa in loo beddelo godka godka biyuhu uga baxaan xarig. Biyaha waxaa lagu buufiyaa asalka godka dhuuban ee asalka ah si ay uga baxaan qulqulka. Dadku waxay istaagaan hoosta sida sidii biyo-dhaca dabiiciga ah ee biyaha u daadanaya dareenka hoose.
Isku qasida Biyaha
Roobabyada qaarkood uma kala beddeli karaan oo keliya biyo kala duwan, laakiin sidoo kale laba ama in ka badan oo isku mid ah waqti isku mid ah. Tusaale ahaan, biyaha dabiiciga ah ee leh biyo xumbo waa habka ugu caamsan ee biyaha lagu qaso.
Ta saddexaad, Tayada Qubayska
Markaad dooranaysid qubayska uma baahna inaad sameysid baaritaanka biyaha, kaliya isha iyo taabashada gacanta. Meelaha ugu muhiimsan ee lagu hubiyo waa silsiladaha miraha silikoonka, iyo dahaadhka.
Markaad iibsaneyso qubeyska gacanta, fiiro gaar ah u yeelo daloolka biyaha ka baxa. Tayada marinka ayaa go'aamisa in tiirka biyaha ee lagu buufiyey qubeyska uu yahay mid isku dheelitiran, leh ama aan lahayn xoojinta xaaladda. Biyo-mareenka qubeyska guud ahaan wuxuu ka samaysan yahay silikoon. Tayada godka biyuhu ka baxaan waa mid hagaagsan, jilicsan oo jilicsan. Hadhuudhkan silikoonku ma aha oo kaliya inuu hubin karo tayada marinka biyaha, oo nadiif ah daryeel la'aan.
Tolmada qubeyska ayaa ah tan ugu milicsiga "farsamada" meesha. Tolmada wanaagsan waa inay ahaataa mid cariiri ah oo farqigu waa inuu yaraadaa, si looga hortago daadashada biyaha loona hubiyo tayada wax soo saarka.
Dusha sare ee dahaadhu waa cabbiraadda adkeysiga qubeyska iyo in kale. Dusha sare ee dahaadhku waa siman yahay, oo aan lahayn calaamado fiican, mana lahaan doono dareemid kacsan marka la taabto. Marka aad wax iibsaneyso, qubeyska waad dhigan kartaa hoosta nalka oo si taxaddar leh u hubi. Haddii aad xoqdo ama aan sinnayn, nolosha adeegga qubayskan sidoo kale si weyn ayaa loo dhimi doonaa.
Afaraad, Xirfadaha Xulista Maydhashada
Fiiri Saamaynta Buufinta
Banaanka, qaabka qubeyska ayaa umuuqda mid lamid ah. Xulitaanku waa inuu eegaa saameynteeda buufinta, qubeyska wanaagsan wuxuu hubin karaa in dalool kasta oo buufin yar oo buufin ah uu buufiyo isku dheelitirnaan. Cadaadiska biyaha ee kala duwan, waxay xaqiijin kartaa saameyn si fiican u qubeys ah. Markaad xulaneyso, waad tijaabin kartaa biyaha si aad u ogaato in diyaaradda biyuhu xitaa tahay.
Fiiri Habka Lagu Buufiyo
Naqshadeynta gudaha ee madaxyada maydhashada ayaa sidoo kale kala duwan. Xulashada qubeyska gacanta, marka lagu daro saameynteeda buufin, habka buufinta qubayska gacanta sidoo kale wuxuu leeyahay kor u kac, duugis, siday u kala horreeyaan. Habka buufin guud wuxuu keeni karaa raaxaysi wanaagsan oo qubeys ah. Roob gacmeed ayaa lagu dooran karaa iyadoo loo eegayo niyadda qaabka buufin ee ku habboon: nooca dabiiciga ah iyo midka wanaagsan ee qubeyska roobka, nooca duugista firfircoon, nooca buufinta iyo diirran, nooca safka biyaha oo siman oo jilicsan, xaaladda biyo-badbaadin ee nooca faleebada.
Fiiri Xudunta Ceramic Valve
Xuddunta waalka ayaa saameyn ku leh isticmaalka dareenka qubeyska iyo nolosha adeegga. Roob wanaagsan wuxuu adeegsadaa aaladda dhoobada dhoobada ah, oo siman oo aan muran lahayn. Xulashada gacmaha ayaa qalloocin kara badhanka, dareemo raaxo, jilicsan si loo hubiyo in badeecada la adeegsanayo si loo ilaaliyo waxqabad siman oo lagu kalsoonaan karo
Fiiri Dusha Sare
Dahaadhida qubaysku waa wanaagsan tahay ama xun tahay, marka lagu daro saamaynta tayada iyo nolosha adeegga, laakiin waxay sidoo kale saamaysaa nadaafadda caadiga ah ee nadaafadda. Qubeyska guud ahaan waa dahaadhka chrome dusha sare. Dahaadhka wanaagsan ayaa lagu hayn karaa 150C ° heerkulkiisu sareeyo 1 saac, majiraan wax xoqan, xoqid la'aan, dildilaac iyo xoqitaan la'aan. 24 saac baaritaanka buufinta milixda acetic acid ma xoqo. Xulashada waxaa lagu arki karaa dhalaalkeeda iyo hufnaanteeda, Roob dhalaalaya oo siman waxay muujineysaa dahaadh isku mid ah, tayo wanaagsan.
Jiilaalku waa halkaan, ku deg deg inaad hesho qubeys qubeys ah, guriga sidoo kale wuxuu sameyn karaa HBS maalin kasta!
Hore:: Naqshadaynta Musqusha Guriga Si Aad U Qurxiso Oo Xaalad Wanaagsan Ku Hayso Qubeyska Maalin Walba Next: Xitaa Haddii Musqusha uu kayaryahay 5 mitir oo laba jibbaaran, Qayb Qoyan iyo Qallalan Maaha Wax Adag Inaan Iga Adkaan!
2021 / 02 / 04 3341
2021 / 02 / 03 3666
2021 / 01 / 16 6104
Xitaa Haddii Musqusha uu ka yar yahay 5 Mitir oo laba jibbaaran, Qeyb Qoyan iyo Qallalan waa N ...
2021 / 01 / 15 5235
2021 / 01 / 11 6488
2021 / 01 / 11 5063